Accueil Ny Mpitandrina Fampianarana FANDALINANA SORATRA MASINA
Mitohy hatrany ny fandalinana ny soratra masina.
Tamin’ny zoma 25 jona no fotoanan-tsika farany teo.
Ny lohahevitra nodinihina tamin’izany dia: Ny Fahafahan’ny Kristiana; Fitiavana sy lalàna:
- Aoka ny Fahafahana natolotr’Andriamanitra antsika tsy ho entintsika araka ny nofo tahaka ny fanaon’izao tontolo izao.
- Andriamanitra izay nanome antsika ny Fanahy sy nahavita asa lehibe eo amintsika no manome tsy mitsahatra ny Fitiavana antsika.
- Ny lalàna dia natolotr’Andriamanitra ho an’ny olombelona mba hifandaminany sy hiainany ny fandriampahalemana sy ny maha - zanak’Andriamanitra azy.
- Ny lalàna dia tsy manohitra ny teny fikasan’Andriamanitra. Ny lalàna dia mpitaiza ny olombelona ho amin’i Kristy mba hohamarinina noho ny finoana isika.
- Ny Fitiavan’Andriamanitra ny olombelona no antony nanomezany antsika ny lalàna mba hahatanterahan’ny didin’Andriamanitra hoe : « Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao, amin’ny fonao rehetra sy ny Fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra, ary Tiava ny namanao tahaka ny Tenanao »
Ny fotoanan-tsika manaraka dia ny Zoma 9 Jolay 2010 amin’ny 9 ora alina ao amin’ny Centre le Rocheton.
Ny Loha-hevitra ho dinihina amin’ny manaraka dia : ny FITIAVANA sy ny FAHAFAHANA (Tohiny).